अर्गानिक अपरिभाषित | भांग बीज तेल | HelpMeHemp - मद्दत MEHemp
घर उत्पादन अर्गानिक अपरिभाषित हेम्प बीज तेल
सहायतामहेम्पको® जैविक अपरिभाषित हेम्प सीड तेल, अक्सर "प्रकृतिको सबैभन्दा उत्तम संतुलित तेल" को रूपमा चिनिन्छ तपाईंको छालाको पोषण कोषहरू नवीकरण गरेर र छालाको विकासलाई प्रोत्साहित गरेर। भिटामिन र मोइस्चराइजिंग गुणहरूले भरिएको, हेम्प बीउज तेल प्राय छालाका प्रकारहरूका लागि उत्तम छ! छालालाई हाइड्रेट गर्न र तेलको उत्पादनलाई सन्तुलनमा राख्न, हाम्रो हेम्प सीउड तेलले तपाईंको छालालाई पोषण दिँदै ड्राईनेस, दाग, दाग, दाग, सूजन, र जलनको रोकथाम गर्न वा लड्न मद्दत गर्न सक्छ। मद्दत MEHemp's हेम्प सीड तेल सजिलै तपाइँको छालाले अवशोषित गर्दछ, pores लाई बन्द गर्दैन, र तपाइँको छालालाई नयाँ, नयाँको लागि डिटॉक्सिफाई गर्नेछ! तपाईंको छाला टोनलाई सन्तुलनमा राख्न, ती हाँसोको रेखालाई कम गर्ने, दागलाई निको पार्ने, वा तपाईंको पहिले नै उत्तम र perfect्ग अझ राम्रो बनाउनेको लागि उत्तम!
हेल्पमहेम्पको जैविक अपरिभाषित हेम्प सीड तेल इष्टतम पोषणको लागि पनि इन्जेस्टेड हुन सक्छ! यसले पेटको स्वास्थ्य सुधार गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ, सजिलै पचाउन सकिन्छ, र हर्मोनलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्दछ। यसले कुनै पनि मनोवैज्ञानिक गुणहरू नभएको पीडा कम गर्दछ, यसलाई गैर-लत वा तपाईंको मानसिक शान्तिको लागि गठन गर्ने बानी बनाउँदछ। एन्टी-इन्फ्लेमेटरी, एन्टीआक्सीडन्ट, जीवाणुरोधी, एंटीवायरल, एन्टिफंगल, छाला पुनर्जनक, न्यूरो-प्रोटेक्टिव र कार्डियो-प्रोटेक्टिव विशेषताहरू।
तपाईको प्रतिरोध क्षमता बढाउनुहोस् र बिमारीलाई दिनको एक चम्मच चम्चाको साथ राख्नुहोस्!
अपरिभाषित हेम्प तेलले प्रयोग गर्दछ:
सलाद ड्रेसिंगहरू, सॉस, मरीनेड्स, डिप्स
रिममा भ्यागुल्समा, फ्राई हलचल, पपकोर्न, दलिया, कफी, स्मूदी, तरकारीहरू, र अन्य स्वादिष्ट व्यंजनहरू
कपाल, छाला, र न .हरूका लागि सामयिक
काठको लागि वार्निश
मेक-अप रिमूभर र मोइश्चराइजर
शरीर हेरचाह, शैम्पू, लोशन, मसाज तेलहरू
साथी पालतू पशु खाना पूरक
सामग्री: जैविक हेम्प बीज तेल
29 समीक्षाहरूमा आधारित एउटा समीक्षा लेख्नुहोस्
हेम्प सीडको तेललाई माया गर्नुहोस्, यो तपाईले पाउनु भएको उत्तम म्युश्चराइजर हो, एक दिनमा १ चम्चा दिन १ बिहान र बेलुका १ बेलुका पीडा रहित, यस तेललाई माया गर्नुहोस्
हेम्प र आर्गन तेल जाडो को समयमा मेरो अनुहार, ओठ, र शरीर बचाउन, यी उत्पादनहरू वास्तवमा अरू जस्तो कुनै moisturizes। केही महिनाको लागि हरेक बिहान हेम्प तेलको एक बड़ा चम्चा भएकोले पनि, मलाई घाँटी दुखाइ र दुखाइ कम भयो जुन मैले वर्षौंदेखि गरिरहेको छु। मलाई मेरो सलाद र स्मूदीमा हँप बीउहरू पनि मन पर्छ। तपाईको शुद्ध, ताजा र जीवनदायी उत्पादनहरूको लागि धन्यबाद!
पूर्ण रूपमा प्याकेज गरिएको थियो र वर्णन गरिएको र वास्तवमै द्रुत रूपमा आइपुगेको थियो।
हामी हाम्रो सहयोग मलाई हेम्प उत्पादनहरु लाई माया गर्छौं !! हेम्प तेलले मेरो पतिलाई उसको सिस्टिक एक्नेमा मद्दत गरेको छ - उसले दिनमा दुईपल्ट तेल राख्दछ जुन प्रायः फाल्ने ठाउँहरूमा, र उसले शून्य ब्रेकआउट्स गर्यो! कुनै नुस्खा मेड्स हेम्प तेल जस्तो काम गर्दैन। मेरो छोराले पनि यसको फिर्ता यसलाई प्रयोग गर्दछ, जुन ब्रेकआउट्सको खतरा हो, र यसले पनि मद्दत गरेको छ! मलाई मेरो कपालमा अर्गान तेलको प्रयोग गर्न मन पर्छ - यसले यति चम्किलो र नरम बनाउँदछ, र कुनै किसिमको फ्रिज हटाउँदछ। लाइम बडी बटर अचम्मको छ र सुगन्ध पनि राम्रो छ !! मैले स्वस्थ पोषकहरूको थप बढावाको लागि मेरो बिहानको प्रोटीन शेकमा भीम्प बीउहरू पनि राखें !! म मद्दत मलाई हेम्प बाट सबै उत्पादनहरु लाई अत्यधिक सिफारिश गर्दछु !!
मेरो छातीमा भएको गठ्ठामा हिड्राडेनिटाइटिस सपुराटिवाबाट मैले पीडित छालाको अवस्थाबाट प्रयास गर्न एक साथीले मलाई नमूना पठाए। हेम्प तेलले आधुनिक औषधीले छुवाएको तरिकामा मद्दत गर्‍यो। मेरो छाला कहिँ पनि स्पष्ट हुँदैन, तर हेम्प तेलले घाउलाई बन्द गरी दियो र सुक्को छ, र सिक्न जारी छ। म यसलाई मेरो अनुहार र सनबर्नहरूमा पनि एक नश्चराइजरको रूपमा प्रयोग गर्दछु। यो सामान बिल्कुल शानदार छ!
मलाई २०१ 2019 को जूनमा गर्भाशय फाइब्रॉएडस पत्ता लागेको थियो र यस मुद्दालाई सुल्झाउन मलाई हिस्टरेक्ट्रोमी सिफारिस गरिएको थियो। म अत्यन्त भारी र पीडादायी मासिक चक्रहरू 3-4- weeks हप्ता लामो बर्ष सम्म चलिरहेको थियो र त्यसैले एनीमिक थियो। मैले अगस्त २०१२ को अन्त्यको लागि मेरो हिस्टरेक्टोमी तालिकाबद्ध गरिसकेको थिएँ तर जूनको अन्त्यतिर दैनिक हेम्प तेलको एक चम्मच लिन शुरू गरें। मध्य अगस्टमा, ठूलो रक्तस्राव बन्द भएको थियो र मलाई सामान्य अवधिहरू आएको थियो जुन अहिले १ बर्ष भइसक्यो। म केरी र बब र उनीहरूको आश्चर्यजनक उत्पादनको लागि कृतज्ञ छु र यो कुनै पनि महिलालाई सिफारिश गर्दछु जो असामान्य र दर्दनाक पीरियडको मुद्दाको बोझले दबिएको छ। उनीहरूले मलाई -,००० डलर को-भुक्तानीमा बचत गरे र मलाई लाग्छ कि मेरो जीवन फिर्ता छ, कुनै अप्ठ्यारो दुर्घटना होइन। धन्यबाद मद्दत MEHemp!
यसैले मैले यो तस्वीर मेरो आर्गनको तेलको समीक्षाको साथ प्रयोग गरें, तर यो समीक्षासँग उचित पनि छ। मैले आर्गनको तेल अर्डर गर्नु अघि हेम्प तेल किनें, र यो सामान छालामा अचम्मको छ र यसको स्वाद पनि ठूलो छ! म यो सामानको बेलुका बेलुका अगाडि लिईरहेको छु, यसको नट स्वाद छ र मलाई यो गुच्छा मन पर्छ। यो सलाद मा पनि आश्चर्यजनक छ !! उच्च रूपमा यस उत्पादन को सिफारिश!
म बिहान एक चम्मच र राती एक चम्मच लिन्छु। यो तेल मेरो जीवनमा मैले लिनु भएको उत्तम चीज हो यसले सबै पीडा, अनुहार र छालाका लागि नमीको प्रयोग गर्दछ र तपाईलाई अचम्म लाग्दछ। धेरै मन पर्यो
हेम्प तेल मेरो सम्पूर्ण परिवारको लागि जीवन परिवर्तन भइरहेको छ। तर मैले आफ्नो भाइको लागि नतिजामा के देखेको छु भनेर प्रभावित छ। ऊ दिनहुँ डरलाग्दो हिप दुखाईमा थियो र जहिले पनि पीडा महसुस हुन्थ्यो।3दिनसम्ममा उनले आफू 90 ०% निको भएको महसुस गरिरहेको छु भने। उसको हिप १० गुणा राम्रो छ र उसको सबै पीडा पूर्ण रूपमा गयो। हामीले आफ्नो छोरासँग संज्ञानात्मक समारोहमा सुधारहरू पनि देख्यौं जुन एक भ्याक्सिनको चोटपटकबाट ग्रसित थियो। कम आन्दोलन, कम दुखाइ, सूजन कम र एन्सेफलोपाथी कम राख्दछ
PMS को कम लक्षणहरूको लागि लाभहरूको बिल्कुल एक वसीद। मैले हेर्दा यो तेलको प्रयोग गर्न थालेदेखि नै राम्रो महसुस हुँदैछ।
म मेरो कुकुरलाई एक दिन चिया पनि दिन्छु। मेरो दुखाई मद्दत गर्दछ।
मेरो छाला धेरै राम्रो छ चुनको माखन प्रेम। तेल राम्रो छ म हरेक बिहान मेरो कफीमा प्रयोग गर्दछु। यसले मेरो जोर्नीहरूलाई धेरै सहयोग गरेको छ। म यो मेरो कुकुरहरुलाई तिनीहरूको जोर्नीहरूको लागि दिन्छु। तिनीहरूको कपाल धेरै नरम र चमकदार छ। मलाई तपाईको उत्पादन मन पर्छ। म सधैं मेरो साथीहरूलाई तपाईंको बारेमा भन्छु।
म तेल प्रयोग गर्दा म अझ राम्रो भर्दछ।
केवल यो सामान मन पर्छ। मेरो छाला कहिल्यै नरम महसुस गरेको छैन। म यसलाई मेरो अनुहार, घाँटी र शरीरमा प्रयोग गर्छु। साथै मलाई मेरो खानाको स्वाद थप मनपर्दछ। यो मेरो पहिलो पटक प्रयोग गरीरहेको छ र म यो अहिलेको छैन भनेर कल्पना गर्न सक्दिन। धेरै खुसी लाग्यो मैले यो पत्ता लगाइन!
मसाज तेल मालिश र पीडा र सूजन को लागी महान। मेरो शरीरको लागि चमत्कार गर्दछ। एक महान उत्पादन को निर्माण को लागी धन्यवाद।
यो तेलले मेरो प्रार्थनाको जवाफ दिएको छ म केही प्रकारको गम्भीर एलर्जीबाट पीडित छु कि मेरो डाक्टरले अहिलेसम्म पनि निदान गर्न सकेको छैन र जब म ब्रेकआउट हुन्छु, म मेरो शरीरमा यि भारी पित्तीहरू पाउँदछु कि माहुरीको छेउमा जस्तो लाग्छ र उनीहरूलाई तीव्रताबाट खुजली हुन्छ। । यो घडी वरिपरि चलिरहेको छ र मैले यति धेरै बेनाड्रिल लिएको छु यसले अब मसँग काम गर्दैन। म पसलमा पसें र शानदार स्टोर मालिकले बनाएको कफीको कफीको साथ तिनीहरूको गहिराइ विवरणको साथ प्रस्ताव गरिएका सबै आश्चर्यजनक उत्पादनहरूको भव्य भ्रमण प्राप्त गरे। म यो तेल सिधै मेरो पित्तीमा लगाउँछु जुन मेरो शरीरमा भए पनि र १० मिनेट भित्र तिनीहरू गयो! यो उत्पादन एक मात्र तरीका हो जुन म night घण्टा भन्दा बढी सुत्न सक्दछु। म निश्चित रूपमा विश्वास गर्दछु कि यी उत्पादनहरूले व्यक्तिको जीवन परिवर्तन गर्न सक्दछन् र रसायनको भन्दा प्राकृतिक औषधीहरूको चयनमा खोल्न सक्छन्। धन्यवाद धेरै मद्दत MEHemp!
सूजन महान उत्पादन!
विषाक्त शरीरको दुखाइ थकान र मांसपेशी दुख्ने बेलामा मलाई सताउँथें, मेरो शरीरमा अत्यधिक तनावका कारण म शारीरिक कार्य गर्न सक्दिन। म तेल रशन यहाँ र त्यहाँ सुरु गर्दछु तर रातमा मेरो शरीर यति कमजोर छ कि यो मुक्त रेडिकल्स को छ। मैले ओछ्यान अघि मेरो शरीरमा तेल फिंजाए ..... जब म उठेँ र मेरा खुट्टामा उभिएँ मेरो दिन सुरू गर्न म बलियो, हल्का, सफा, स्वस्थ महसुस भएकी छु र यसले कुनै पीडा अनुभव गरेकी छैन, म प्रभावित छु। मद्दत MEHemp Inc. उपचार गुणहरु को सत्य बोल्छ कि त्यहाँ समावेश उत्पादहरु। धन्यबाद, हेल्पएमईहेम्प इंक। प्लेटफार्म निर्माणको लागि जसले हामीलाई जैविक प्राकृतिक संसाधनहरूको सेवा गर्दछ, ताकि हामी पनि बाँच्न र सबै आश्चर्यजनक सुविधाहरूमा साझेदारी गर्न सक्दछौं।
खोकी खान्छु मैले २० बर्षदेखि लामो समयदेखि खाँको दुखाइ कम गर्न भैपको तेल लिन शुरू गरें। मलाई कसैले सहयोग गर्न सकेन। तेलले कफलाई धेरै घटाएको छ। मलाई आशा छ अन्ततः खोकी पूर्ण रूपमा हराउनु म भांग तेल लिन जारी राख्नेछु। अहिले सम्म यो एकमात्र चीज हो जसले मलाई सहयोग गरेको छ।
चिनी र पीडा months महिना अघि गएको थियो भनेर मलाई भनिएको थियो कि म बॉर्डरलाइन डायबेटिक हुँ र तिनीहरूले मलाई मेड्समा राखे यसका लागि मैले केही समय लिएँ र त्यसपछि यसलाई लिन बन्द गर्यो र लगभग २ महिना अघि मैले तपाईंको हेम्प तेल प्रयोग गर्न सुरु गरें र आँखा चिकित्सककहाँ गएँ। र चिनी छैन यो अद्भुत तेल हो मलाई यो मन पर्छ मेरो घुँडा पनि खराब छ र मौखिक रूपमा यो तेल लिनुबाट म पूर्ण रूपमा पीडामुक्त छु त्यसैले धेरै धन्यवाद। यो तपाईंको अनुहारको लागि पनि एक अद्भुत मोइश्चराइजर हो
चमत्कारी तेल यो तेल एक चमत्कार हो। मैले केहि महिना अगाडि प्रयोग गर्न सुरु गरेदेखि म बिरामी भएको छैन। म मेरो प्रतिरोधात्मक प्रणालीमा समग्र बृद्धि महसुस गर्दछु! त्यो मात्र होईन तर मेरो छालामा लागू गर्दा यसले मलाई यस्तो सुन्दर चमक दिएको छ। म सबै समय प्रशंसा प्राप्त गर्दछु! म पनि कुकुरहरूलाई त्यहाँ कोट र पाचन समस्याहरूको लागि दिन्छु। म किन यसलाई चमत्कारी तेल भन्छु। अर्को महान उत्पादन को लागी धन्यवाद!
लामो समय सम्मको हड्डीको दुखाई म हाईस्कूल र कलेज भरमा एक पहलवान भएको थिएँ र मेरो पायललाई १० पटक भन्दा बढी माच्यो। सब भन्दा नराम्रो चोटपटकको कारणले मेरो टखने अ .्गुरको आकारमा बढ्यो र यसले वास्तवमा कहिल्यै पूर्ण रूपमा निको हुन सकेन। वर्षौंदेखि दुखाइ बढ्ने र सूजन दाग टिश्यूमा परिणत भयो। कहिले काँही मेरो टाउको हिंड्दा वा भ down्या .मा जान दिन्थ्यो। मैले पहिलोपटक हेम्प तेल र म्याग्नेशियम स्प्रे प्रयोग गर्दा म शंकास्पद थिए। यसलाई दैनिक रूपमा मौखिक रूपमा लिन र मेरो टखमामा केही तेल खन्याउने सिफारिश गरिएको थियो, त्यसपछि म्याग्नीशियम स्प्रे द्वारा। मैले यो दिनचर्या करीव २ हप्ता अघि सुरु गरें र दुखाइ लगभग पूर्ण रूपमा शान्त भइसकेको छ र सूजन size 10% को आकारमा घटेको छ। म भुईंमा थिए! १० बर्ष भन्दा बढि दुखाई पछि महान उत्पाद र अत्यधिक प्रभावी!
IV एआरएम पेन म २ हप्ता अस्पतालमा थिएँ र घरमा आयो र मलाई मेरो पाखुरामा ठूलो पीडा भयो। म फेरि अस्पताल जान र उनीहरूलाई धेरै गलत, धेरै पीडा बताउन तयार थिएँ। मलाई हेम्प तेल याद छ जबकि म दैनिक रूपमा मौखिक रूपमा लिन्छु। मैले मेरो पाखुरामा लागू गरें, minutes मिनेट दुखाइ सक्यो, मैले नुहाउन पछि पनि लगाइन शायद सायद यसको आवश्यकता परेन। राम्रो सामग्री। मेरा साथीहरूलाई RA र fibromyalgia को साथ भन्नको लागि जाँदै, यसले मद्दत गर्दछ। मलाई थाहा छ।
आश्चर्यजनक तेल! मैले पहिलो भन्दा थोरै महिना पहिले यो प्रयोग गर्न शुरू गरें। मेरो साथी कोलिनले मसँग केहि नमूनाहरू साझा गरे र उनले अनुभव गरेका नतीजाहरूको वर्णन गरे। मान्छे म हुकिएको हुँ। म एक चम्मच एक दिन लिन्छु र अब रातमा मेरो मॉइस्चराइजरको रूपमा प्रयोग गर्दछु। एक हप्तामा मैले different बिभिन्न सहकर्मीहरूले मलाई मेरो छाला "चम्किरहेको" भन्यो मैले3हप्ता सम्म प्रयोग गरिसके पछि। मेरो छाला सूयो नरम छ। मसँग केवल मासिक हल्का ब्रेकआउटहरू छन् तर यसले तिनीहरूलाई वास्तवमा पनि कटौती गर्यो। मेरी १ y यो छोरीले अहिले प्रयोग गरिरहेकी छ र यसले उसको निधारमा छालाको बम्पहरू हटायो, उसको शुष्क छालाको प्याचहरू र हालसालैको ब्रेकआउट खाली गर्दै छ (अन्य उत्पादनहरूले प्रयोग गरिरहेकी छिन्)। उनीलाई यो मन पर्छ! हामी एक टोन प्रयोग गर्दैनौं, त्यसैले थोरै लामो दूरी जान्छ। बुढेसकालको छालाका लागि मैले लोब्याँसेखो थपेको छु। यो भिज्छ र भारी वा अतिरिक्त तेल कुनै पनि हुँदैन। मैले PMS को बखत पनि मेरो पेटमा रबिंग गर्न थालेको छु र यसले मेरो पेट छोड्छ! म मेरा साथीहरूलाई भन्छु जो प्रयास गर्न को लागी - यदि उनीहरूलाई यो मनपर्दैन भने, म यो किन्छु। म यो तेललाई माया गर्दछु र यसले धेरै र आन्तरिक र स्थलगत रूपमा लाभ प्रदान गर्दछ।
स्वस्थ दिनचर्या म हरेक रात तेलको एक खुराक लिन्छु। यसले मलाई यो थाहा पाउँदा राम्रो महसुस गराउँछ कि मेरो शरीरले यसको आवश्यकता पाइरहेको छ। म अब बिरामीको दुई चरणमा बाँचेको छु जुन मेरो सदस्य5सदस्यको घरमा पुगेको छ। सामान्यतया म प्रत्येक बिमारी पाउँदछु जुन मेरो बाटोमा उड्दछ, तर अब हैन। मैले यो मेरो श्रीमान्को पीडामा उनलाई थापेको छु र केही राहत दिनको लागि। राम्रो खरीद।
जादुई ... मँ तँको हेम्प तेलले छोडिदिएको छ! म हरेक बिहान मेरो कफीमा एक चम्चा राख्छु ... म हप्ताको एक पटक यसलाई "मॉइश्चराइजर" को रूपमा प्रयोग गर्दछु ... म हरेक दुई दिनमा मेरो घावलाई केही पानी दिन्छु। हामी दुबैलाई माया गर्छौं !! मैले मेरो आँखा वरिपरि "एन्टी-एजिंग" रोलर पनि बनाएँ - - तपाईको हेम्प तेल मेरो आधार, यारो / पोम, जेरेनियम र लोबानिक आवश्यक तेलहरूको रूपमा। चिल्लो छाला र कम कागहरू खुट्टा !! LOVE!
केटो मित्रैलो !!!!!! म मेरो सम्पूर्ण बोसो बम सबैको लागि तेल खोज्दै थिएँ मलाई यो एक दिन डोन्डडे मलाई एक दिन हेम्प तेल तेल हो मैले लहरामा हेरे र यो अचम्मको कुरा हो अब म शुद्ध तेलको फाइदा पाउँछु जुन मेरो पोषणशैली भेटिन्छ र बिल्कुल मलाई राख्छ केटोसिसमा! एउटा ढु stone्गाले दुई चरालाई मार्नु कति रमाईलो छ!
एउटा "LIT" उत्पादन! म वयस्कको रूपमा के भन्न सक्दछु म यसलाई मेरो छाला र जीआई ट्र्याकको लागि प्रयोग गर्दछु, मेरो ११ बर्षे उमेरले यसलाई रातको निदाउन प्रयोग गर्दछ। जब र ११ बर्षेली याद राख्छ बिरामी अघि राख्नु पर्छ यसले मलाई फाइदा महसुस गर्ने बताउँछ! के मैले अझ बढी भन्नु पर्छ कि एक LIT उत्पादन हो!
स्वस्थ पथ - यो तेललाई प्रेम गर्नुहोस् जीवन धम्की दिने रोगको साथ बच्चा जन्माउनु तनावपूर्ण, डरलाग्दो र हृदय छाउने छ। पछिल्लो केहि वर्षहरुमा मैले आफूलाई गुमाएँ, तनाव खाए र दैनिक चिन्ताको साथ बाँचें। मेरो छोरा अहिले स्थिर छ र मैले महसुस गरें कि मैले आफ्नो ख्याल आफै राख्न शुरू गर्नुपर्छ। भाग्यवश मैले हेल्प मे हेम्पको बारेमा परिवारका सदस्यहरूको पोष्ट देखें! मैले स्वस्थ र व्यायाम गर्न थालेको छु र ममा फरक छु। गत केहि हप्ताहरुमा मैले यो हेम्प तेललाई मेरो दैनिक तालिकामा समावेश गरेको छु। मैले महसुस गरेको भन्दा धेरै फरक पाएको छु - मेरो चिन्ता स्थिर भएको छ, मेरो लालसा कम भएको छ र मेरो छाला (एक राम्रो बोनसको रूपमा) आश्चर्यजनक महसुस गर्दछ! म मेरो हेरचाह गर्ने पनि यस मार्गमा जारी राख्ने छु र मसँग हेल्प मी हेम्पबाट उत्पादनहरू धेरै प्रयोग गर्न जारी राख्नेछु (विशेष गरी यो तेल!)!
आश्चर्यजनक तेल म यो उत्पादलाई मेरो स्मूदीको लागि मात्र प्रयोग गर्दछु तर म यसलाई मेरो कुकुरका लागि दैनिक प्रयोग गर्दछु। हाम्रो परिवारले यस तेललाई मनपराउँछ र यो कुनै पनि चीजसँग मिसिन सकिन्छ र यो स्वादको छ! :)
एक घटनाबाट यो उत्पादन पायो र माया गर्नुहोस्! तपाईं निराश हुनेछैन!
हाम्रो परिवारले तपाईको उत्पादनहरूको साथ त्यस्तो ठूलो अनुभव प्राप्त गर्‍यो। हाम्रो कुकुरले तौल, छाला सुक्खा हुनु हुँदैन, र हालसालै उसले पूर्ण रूपमा खान बन्द गरिसकेको थियो। हामी धेरै चिन्तित भयौं र पशु चिकित्सकमा लग्यौं। सबै चेकअपहरू र त्यसपछिको ठूलो बिल पछि, उनीहरूले भनेका सबै थिए, "हामीलाई के गल्ती थाहा छैन।" उहाँलाई उसको खाना खानको लागि लोभ्याउने प्रयास गर्दा हामीले सुनेका थियौं कि तपाईंको कुकुरहरूको खानामा तेल थपेमा उनीहरूलाई खानेकुरा, उनीहरूको कोट इत्यादिमा मद्दत पुर्‍याउँछ ... त्यसोभए हामीले किन पत्ता लगाएनौं! एक हप्ता पछि, उनले फेरि सामान्य खान शुरू गरे। एक महिना र आधा पछि, उसको छालाको ठोलो अस्तित्वमा छैन। उहाँ अहिले स्वस्थ तौलमा हुनुहुन्छ! पशु चिकित्सकहरूले पनि हामीलाई के गरे भनेर सोधे। यद्यपि मैले भन्नै पर्छ, म यति खुसी छु कि मेरो बहुमूल्य कुकुरलाई रसायनले पम्प गर्नु पर्दैन जब कसैलाई के गलत हो भनेर थाहा थिएन, र यो सबै समय उत्तर थियो।
धन्यबाद, मलाई हेम्प मद्दत गर्नुहोस्! हालसालै आँखा दुख्ने क्रममा मेरो आँखाको डाक्टरकहाँ गएँ, र विस्तृत जाँचपश्चात पछि उनले निर्धारण गरे कि मेरो आँखा एकदमै शुष्क छ। उनले २ विभिन्न प्रकारका आँखा ड्रपहरू सिफारिस गरे, जसले १००% लाई मद्दत गरेको छ। मँ मेरो सहयोगी हेम्प हेम्प हेमलाई मेरो बिहानको स्मूदीमा थपेको हुनाले मेरो आँखाले धेरै राम्रो महसुस गरिरहेको छ। मैले एउटा आँखामा रोक पारेको छु र रातको समय मात्र प्रयोग गर्छु। म हप्तामा केही पटक मेरो सलादमा केही भैंसीको बिउहरू छिचोल्दै छु र यो पनि मेरो पाचन समस्याहरूको साथ वास्तवमै मद्दत गरिएको थियो !! धन्यबाद मलाई हेम्प !! लाइम बडी बटर प्रयास गर्न को लागी प्रतीक्षा गर्न सक्दैन !!
हाम्रो दैनिक पोषणमा प्रमुख हामीले तपाईंको धेरै उत्पादनहरूबाट उत्कृष्ट परिणामहरू पाएका छौं। तपाईंको हेम्प तेल र सन बीज हाम्रो दैनिक पोषण मा एक मुख्य हो। म मेरो धेरै जसो खाना पकाउने पदार्थको रूपमा प्रतिस्थापन फ्याटको साथसाथै मेरो छालाको साथ मेरो रातको रेजिमेन्टको रूपमा हेम्प तेल प्रयोग गर्दछु। हेम्प बीउहरू प्रायः स्वाभाविक रूपमा रमाइलो हुन्छन्, तर मेरो पेन्ट्री जैविक ग्रानोला र मेरो बिहानको कफीको साथ भांग दुधमा हिट भएको छ। तपाईंको लाइम बडी बटर एक परिवार मनपर्ने छ! माथिका उत्पादनहरूसँगको संयोजनमा मैले मेरो पाचन सम्बन्धी समस्याहरूको साथ ठूलो भिन्नता देखेको छु (अब म नियमित छु), मेरो छालाले ठूलो महसुस गर्छ र मेरो छोराको एक्जिमा नियन्त्रणमा छ। धन्यवाद Myorski परिवार!
म यो उत्पादन को बारे मा अधिक उत्साहित हुन सक्दैन! यो साचो हो! मेरी छोरीको टाउकोमा गम्भीर छालरोग छ। हामीले धेरै उपचारहरू प्रयास गरेका छौं; आवश्यक तेलहरू, महँगो शैम्पूहरू र हाइड्रोकोर्टिसोन क्रिमहरू र कुनै प्रयोगको समाधानहरू छैनन्! म अर्को साथीको पोष्टमा आएको थिएँ जो मलाई हेल्प मी हेम्पबाट किनेको जैविक हेम्प तेल प्रयोग गर्दै थिए र उनले सोरायसिसको लागि प्रयोग गर्न सकिने देखे। मैले मेरो छोरीको टाउकोमा सुत्ने कोठामा एउटा कोट लगाएँ र अर्को बिहान हामीले नाटकीय परिवर्तन देख्यौं! रातो रातो रातो रातो रातो रातो रातो रातो रातो रातो रातो झोला रातो रकम कम भएको थियो। म यो उत्पादन को बारे मा अधिक उत्साहित गर्न सक्दैन!